Varairidzi Vochema neMitero Iri Kutorwa neZIMRA paMari Dzekubatsirikana
Hurumende inonzi yave kubatira mitero varairidzi vari kupiwa mari dzekubatsirikana, izvo zvinonzi zvave kukonzera bowabowa mukati mevarairidzi.
Masangano anomirira varairidzi anoti vashandi vebazi rehurumende rinoita zvemitero, reZIMRA, vari kupinda muzvikoro vachitora mazita evarairidzi vari kupiwa mari dzekubatsirikana idzi nevabereki, izvo zviri kuzoita kuti vazokwanisa kubatira varairidzi ava mitero.
Pasi pemutemo wePublic Service Act, kana mushandi wehurumende akatambira imwe mari pamusoro peyaanotambiriswa nehurumende, anofanirwa kuzivisa hurumende nezvayo kuitira kuti azobatirwa mutero.
Nyaya yekupiwa mari dzekubatsirikana kwevarairidzi yagara iri nyaya iri kunetsa sezvo vasiri vose varairidzi vari kuwana mari idzi.
Vamwewo varairidzi, zvikuru kumaruwa, vanonzi vari kupiwa rubatsiro rwechikafu, izvo zviri kunzi nevamwe zvinofanirwa kubatirwawo mutero, kana hurumende ichida kuenzanisa vose vari kubatsirwa.
Mutauriri weZIMRA, VaTaungana Ndoro, vanoti vachiri kuunganidza gwaro pamusoro penyaya iyi kuitira kuti vazotaura zvakadzama nevatori venhau.
Munyori mukuru weProgressice Teachers Union of Zimbabwe, VaRaymond Majongwe, vanoti kana hurumende ichida kubatira varairidzi mitero, inofanirwa kubatirawo chero ani zvake anopiwa mari yekutendwa kana kubatsirikana, zvakaita sevemitambo.
Mukuru weZIMTA, VaSifiso Ndlovu, vanoti sangano ravo rakatotambira zvinyunyuto zvakawanda kubva kunhengo dzavo dzekuMasvingo pamusoro penyaya iyi.
Nyanzvi munyaya dzemitemo uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe, vari zvakare sachigaro weNational Constitutional Assembly, Muzvinafundo Lovemore Madhuku, vanotiwo mutemo wemitero, kana kuti Income Tax Act unobvumidza ZIMRA kuti ibatire mutero ani nani zvake anongotambira mari, zvisineyi kuti yabva kunaani.